That's so good, right?: High-School Ecstasy
ညနေစောင်းနေလုံးကြီးက မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းအနားသတ်ဆီသို့ လျှောဆင်းကျနေလေပြီ။ သစ်ရွက်စိမ်းကလေးများကလည်း ညနေခင်း၏ လေပြည်ထဲတွင် အရောင်တစ်မျိုးဖြင့် ယိမ်းနွဲ့ပျော်ပါးနေသည်။ ပုစွန်ဆီရောင် တိမ်တောက်နေသော ကောင်းကင်သည် ပန်းချီဆရာ တစ်ယောက်၏ လက်ရာမွန် ပန်းချီကားတစ်ချပ်ကဲ့သို့ လက်ရာမြောက်လွန်းလှ၏။
မကြာခင်မှာပင် မဟူရာအမှောင်ထုက တစ်စစတိုးဝင်လာတော့သည်။ ထိုစဉ် မလဲလှယ်ရသေးသော ကျောင်းစိမ်းဝတ်စုံကို လဲလှယ်ဖို့ ကျွန်တော်သတိရမိသည့်ခဏ ကျူရှင်မှာ ကိုထူးဆီကငှားခဲ့သော စာအုပ်တစ်အုပ်အား ကျောပိုးအိတ်ထဲကနေ စာကြည့်စားပွဲပေါ် သတိတရတင်လိုက်မိရသည်။
Adam ရဲ့သွင်ပြင်လက္ခဏာတိုင်း နှင့်အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုခြင်းကိုက စွဲဆောင်မှုအပြည့်ပါ။ ဂရိနတ်ဘုရားရုပ်ထုတစ်ခုလို ကျယ်ပြန့်ခိုင်မာ သော ကျောပြင်၊ abs နှင့် ပြည့်စုံလှသောလက်မောင်းဆုံ(biceps) များဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။ ကျောင်းမှာတော့ သူပဲ အားကစားသမားတစ်ယောက်လို ကြံ့ခိုင်သန်စွမ်းတာ။ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်စလုံး ၁၈နှစ် ကိုယ်စီဖြစ်ပြီး သူငယ်ချင်းလို့တော့ ပြောလို့ရပါတယ်။ အရွယ်ရောက်စပြုသူတို့ ထုံးစံအတိုင်း စကားပြောတဲ့အခါ ဟိုကိစ္စ ဒီကိစ္စပြောမိကြပေမဲ့ လိင်ကိစ္စတို့ စော်ကိစ္စတို့ကို တော့ ထည့်မပြောဖြစ်ကြပါဘူး။ စကားလက်ဆုံ မပြောဖြစ်ကြဘူးဆိုပါတော့ဗျာ။ ကျွန်တော်ကတော့ အခွင့်အရေးရတိုင်း အမြဲလိုလို မထိ တထိ အသားယူတာတော့ရှိပါတယ်။
မကြာခဏဆိုသလို ကျွန်တော် gym ကိုလေ့ကျင့်ခန်းယူဖို့သွားဖြစ်ပါတယ် ကြံ့ခိုင်တဲ့ကိုယ်ကာယသွင်ပြင်ကို ထိန်းသိမ်းဖို့ပေါ့နော်။ ကျွန်တော်သွားတိုင်း Adam ကရောက်နှင့်နေပြီးပြီ။ တစ်ခုသောသောကြာနေ့ နေမွန်းတိမ်းချိန်မှာ ကျွန်တော်နှင့် Adam ကျောင်းပတ် ၀န်းကျင်ကို hang out လုပ်ဖြစ်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်နှင့် Adam တို့နှစ်ယောက် အပြင်ရောက်တော့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေတွေဟာ နေမင်းကို ကန်ထုတ်ပြီးသကာလ မည်းမှောင်တဲ့တိမ်မည်းတွေကို မျှားခေါ်နေပါရဲ့။ ကျောင်းဝင်းထဲမှာတုန်းက ဖျတ်ကနဲတော့ လျှပ်ပျက် တာ မြင်လိုက်မိတယ် ထင်တာပဲ။
ကျောင်းဝန်း ရှေ့မလှမ်းမကမ်းက ပန်းခြံထဲမှာ ခဏထိုင်မိကြတော့ ခပ်ကြပ်ကြပ် တီရှပ် နှင့် ဘောင်းဘီတို့ကို ၀တ်ဆင်ထားတဲ့ သူ့ ကိုယ် လုံးကို ကြည့်ပြီး ကျွန်တော့် သွေးတွေက အလိုလိုဆူပွက်လာမိပါရဲ့။ နှစ်ဦးသား ကောင်းကင်ကို မော့ကြည့်စဉ်မှာပဲ မိုးစက်များဟာ မျက်နှာပေါ်ကို ခုန်ပေါက်ကျလာပါရော။ မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲ မိုးသည်းထန်လာပြီး နှစ်ယောက်စလုံးရွှဲစိုကုန်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်ရယ် သူရယ် ခပ်မြန်မြန်ထ ကျောင်းကြီးရဲ့ အရှေ့တံခါးဝဆီ ခပ်သွက်သွက် အပြေးအလွှား သွားတာပေါ့လေ။ ကံကောင်းစွာပဲ ဆရာတစ်ယောက် သော့ခတ်ဖို့မေ့သွားတယ်ထင်ရဲ့ တံခါးမကြီးဘယ်ဘက်နားက တံခါးတစ်ချပ်က ခပ်ဟဟ။
သူလည်းစကားမပြော ကျွန်တော်လည်း စကားမဆိုဖြစ်ဘဲ ၀င်သွားကြပါတယ်။ သူ့ရဲ့စိုစွတ်နေတဲ့ တီရှပ်က ရင်အုပ်တွေကို ထင်းကနဲမြင် နေရပေမဲ့....အောက်ပိုင်း ပေါင်ခွဆုံက ရေစိုပြီး ကပ်မနေတာကခက်တယ်နော်။ ခဏတာငြိမ်နေပြီးမှ ရာသီဥတုအခြေအနေကြည့်ဖို့ တီဗွီ တစ်လုံးလောက်ရှိတတ်တဲ့နေရာကို ရှာဖို့ သူကမေးသဗျ။ စက္ကန့်နည်းနည်းကြာအောင်တော့ ကျွန်တော်စကားမပြန်ဖြစ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ အသံချိုချို ရဲ့ လှုံ့ဆော်မှုကို ဘယ်သူကများ ငြင်းဆန်နိုင်မှာလဲလေ။
နှစ်ယောက် ဘေးခြင်းယှဉ်ကာ မှောင်နေတဲ့ အလယ်လမ်းမကြီးအတိုင်းလျှောက်ကာ ကျောင်းကြီးရဲ့အလယ်ပိုင်းဘက်ကို သွားကြ ပါတယ်။ ကောင်းကင်ကြီးက တကယ့်ကို ပိန်းပိတ်အောင်မှောင်သွားပါပြီ။ ညနေစောင်း ၆နာရီထိုးတာဖြင့် သိပ်မကြာသေးပါဘူး။ ခန်းမကြီးထဲက ဖြတ်သန်းလာစဉ် ကျွန်တော်ကတော့ သူ့ပေါင်တံတွေရဲ့ လှုပ်ရှားနေတာကို ကြည့်နေမိတယ်။ အားမာန်ပါပါ လှမ်းနေတဲ့ ခြေလှမ်းနဲ့အတူ သူ့ပေါင်တံတွေဟာ ၀တ်ထားတဲ့ ဘောင်းဘီနှင့်အတူ အတော်ကြည့်လို့ကောင်းတာ ဂျင်းဘောင်းဘီကြော်ငြာ မော်ဒယ်လ်တွေ အတိုင်းပါပဲ။ ကျွန်တော့်မှာ သူ့ကိုကြည့်နေမိတာ သူသတိမထားမိအောင်ကြိုးစားရပါတယ်။ တီဗွီကိုတွေ့တော့ ဖွင့်လိုက် ကြချိန် ကျောင်းခေါင်မိုးပေါ် မိုးစက်ခပ်ပြင်းပြင်း ထိခတ်သံတွေက သတိမမူမိလိုက်အောင်ပါပဲ။ သူခပ်မြန်မြန် ရှာလိုက်တဲ့ ရာသီဥတု အကြောင်း ဆွေနွေးနေတဲ့အစီအစဉ်မှာ အနီရောင်အကွက်တစ်ခုဟာ ကျွန်တော်တို့မြို့ဆီကို ဦးတည်လာနေကြာင်းပြတာကို မြင်လိုက် ရတယ်။
မိုးလေ၀သသတင်းကြေငြာသူကတော့ "ကျွန်ုပ်တို့ ဧရိယာရဲ့ အပေါ်တည့်တည့်မှာ ထုထည်ကြီးမားတဲ့ မုန်တိုင်းစနစ်တစ်ခုဖြစ် တည်နေတာကို မြင်နိုင်ပါတယ်။ မုန်တိုင်းဟာ နောက်ထပ် လေးနာရီလောက် တည်ရှိနေမယ် သို့မဟုတ် ဒီထက်စောစော ပြန်လည်ငြိမ် သက်သွားနိုင်ပါတယ်လို့ ဟောကိန်းထုတ်ပါရစေ" တဲ့ပြောနေပါရဲ့။
လျှပ်ပျက်မီးရောင်များက လမ်းမပေါ်မှာ ရေများလျှံလာမလား မျှော်လင့်မိစေပါရဲ့။ Interstate6နှင့် Mellow Meadows လမ်းကျဉ်းလေး ဟာ မကြာခဏဆိုသလို ရေလျှံတတ်ကြောင်း အစီရင်ခံစာတက်လာနေကြဆိုတော့ ဘာများကြားရဦးမှာပါလိမ့်။ ကျွန်တော်တို့ကျောင်းက Mellow Meadows ပေါ်မှာတည်ရှိပြီး I-6 က ကျောင်းကိုလာနိုင်တဲ့ တစ်ခုတည်းသောလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
Adam က ကျွန်တော့်ကိုကြည့်ပြီး "အင်း....ငါ့အထင် ဒီမှာ ခဏတော့ရှိနေရဦးမှာပဲ" လို့ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း သူ့ဆုံးဖြတ်ချက် အတိုင်း ခန်းမထဲက ခုံတန်းပေါ် သူနှင့်အတူ ခြေပစ်လက်ပစ်ထိုင်ချလိုက်ပါတယ်။ နှစ်ယောက်စလုံးက တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် သိနေခဲ့ပြီးသားဆိုတော့ Intro တွေပေးပြီး မိတ်ဆက်စရာမလိုဘူးပေါ့ဗျာ။
"ကျွတ်...အ၀တ်စိုတွေနဲ့ နေရတာလောက် ငါမုန်းတာမရှိဘူး" သူ့ကိုယ်ပေါ်က ဂျင်းဘောင်းဘီနှင့် ရှပ်အင်္ကျီတွေကို ကိုင်ကြည့်ရင်း ညည်းသဗျ။ "လာ...ဒီဘက်မှာ Locker အခန်းတွေရှိတယ်။ အ၀တ် တွေ ထားခဲ့တာရှိရင် လဲဝတ်လို့ရမယ်ကွ"
သူလျှောက်သွားတဲ့နောက်က ထပ်ကြပ်မကွာ လိုက်သွားတာ နောက်ဆုံးတော့ အမျိုးသားအ၀တ်လဲခန်းထဲက Locker တွေနားရောက် သွားပါတယ်။ အခန်းထဲမ၀င်သေးခင်မှာပဲ သူ့ကိုယ်နဲ့တစ်သားတည်းဖြစ်နေတဲ့ တီရှပ်ကို ခေါင်းပေါ်ကနေ စွဲချွတ်ပစ်ရော။ ရင်ထဲ ဒိတ် ကနဲ ဖြစ်သွားတာပဲဗျာ ဖျက်ကနဲသူက ကျွန်တော့်ကိုလှည့်ကြည့်တာကြောင့် အကြည့်သူခိုးမိတော့မလို့။ သူရော ကျွန်တော်ရော ချိတ် ထားတဲ့ ဘောင်းဘီတိုတွေနှင့် တီရှပ်ကိုယ်စီ ဆွဲယူလိုက်ကြတယ်။
"ဟေး!!" Adam က အလန့်တကြား။
" ငါရေသွားချိုးဦးမယ်ကွာ၊ မင်းလည်းချိုးချင်ရင်လိုက်ခဲ့ပေါ့"
ဆံပင်တွေ ထောင်ထပြီး ၀မ်းသာလှိုက်လှဲစွာဖြင့် "Yes" ပေါ့ ဟိဟိ။ ကျွန်တော်ခေါင်းငြိမ့်ပြီး ပြုံးပြလိုက်မိပါတယ်။ Adam ရေပန်းအောက် ကို စ၀င်ဖို့ပြင်တော့ ကျွန်တော်လည်း ကိုယ်ပေါ်က အ၀တ်မှန်သမျှ ခပ်သွက်သွက် ချွတ်ပစ်သည်ပေါ့။ ရေပန်းအောက်ကိုဝင်ဖို့ ကျွန်တော် ခြေစလှမ်းချိန်မှာ ကမ္ဘာမြေကြီး တုန်ဟီးသွားမတတ် အသံကျယ်ကျယ် မိုးချိန်းသံနှင့်အတူ လျှပ်ပျက်တာမှ ၀င်းကနဲ လက်ကနဲပါ။ ကျွန်တော် ယောင်ယမ်းပြီး နံရံက တစ်ခုခုကို ဆွဲကိုင်လိုက်တာ ဘာမှမရှိတော့ ရေချိုးကြမ်းပြင်ပေါ် နောက်ပြန် ဘိုင်းကနဲလဲကျရပြီပေါ့ နော်။ ကြမ်းပြင်ပေါ်ဝယ် မထနိုင်မပြုနိုင် မျက်လုံးမှိတ်ပြီး ခဏတော့ ငြိမ်သက်နေရပါတယ်။ တဖြန်းဖြန်း ကျနေတဲ့ ရေသံတွေအောက်က ခြေလှမ်းစရွေ့သံကို စတင်ကြားရပါရော။ မျက်နှာပေါ် မျက်ဝန်းတွေပေါ်ရောက်နေတဲ့ ရေတွေကို လက်နှင့် ပွတ်သပ်ဖယ်ရှားပြီး မျက်ခွံများ ကို ဖျက်ကနဲဖွင့်လိုက်တယ်။ တခြားဟာတွေကို သတိမထားမိခင်မှာ ခပ်ထွားထွား လှုပ်ရမ်းနေတဲ့ ငပဲ၊ ပြုံးမြမြ မျက်နှာပေးနှင့် Adam ကို အဦးဆုံးမြင်မိသည်ပေါ့။
နယ်ပြောင်းသွားတဲ့ မိတ်ဆွေဟောင်းနဲ့ ပြန်တွေ့မယ်။ အဟုတ်ပဲ ‘ကျော်ကျော်’ တစ်ယောက်စိတ်တွေပြောင်းသွားလိုက်တာ။ အရင်က ကိုယ်နဲ့ပြိုင်ဘက် ဖြစ်ပေမယ့် အခုတော့ သူပဲ အစစအရာရာ ကူညီနေပါသည်။ ကျောင်းဝင်ခွင့် ပြန်လျှောက်ရမှာ၊ ကျောင်းစုံစမ်းရတာ တွေအပါအ၀င် လိုအပ်သည် ထင်တာလေးတွေကိုပါ ကူညီသည်။
ကျွန်တော့်လိုအပ်ချက်တွေကို သူထောက်ပြသည်။ ကျွန်တော့်အတွက် မိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်နိုင်၏။ မေမေကတော့ ရုတ်တရက် လှမ်း ခေါ်သည့် ဖေဖေ့ကိုသာ အပြစ်တင်တော့သည်။ ဒီနိုင်ငံမှာလည်း အထက်တန်းကျောင်းတောင် မပြီးဆုံးသေးတော့ ဖေဖေနေသည့် နိုင်ငံမှာလည်း အထက်တန်းကျောင်းလောက်ပြန်တက်ရရင် ကံကောင်း။
University Foundation Programs တွေထဲက တစ်ခုခုကို တက်တော့မယ်လုပ်မှ ဖေဖေက အရေးတကြီး။ YIUS ကဆရာတွေက ကျွန်တော့်ကို ကရုဏာဒေါသောတော့ပြောကြပါသည်။ အစိုးရအထက်တန်းကျောင်းက ဆရာမတွေကတော့ မပြောပါနဲ့တော့ မျိုးချစ်စိတ် ရှိစေ ပြစေချင်နေသေးသည်။
" ဟုတ် ဖေဖေ....ကျောင်းက ခေါ်စာရတာနှင့် လာဖို့အသင့်"
" ဟုတ်ပါ ဖေဖေရ...မေမေက အဖော်ရနေပါပြီ မမကြီးတို့ လင်မယား သူတို့တိုက်ခန်းသော့ ပိတ်ပြီးလာနေတယ်လေ။ အိမ်မှာ တူ တူမ တွေနှင့် ဆူနေရော"
နှုတ်ဖျားက နာကျင်ရမှုကြောင့် ညည်းညူမိပေမဲ့ မျက်လုံးအကြည့်ကိုတော့ သူ့ရတနာပစ္စည်းဆီက မလွှဲဖယ်ဖြစ်ပါ။ ကျွန်တော့် လက် ကိုဆွဲ ပခုံးကို ဖေးမကာ မတ်တပ်ရပ်နိုင်ဖို့ သူ ကူညီပါတယ်။ ကျွန်တော့် ငပဲက တဖြည်းဖြည်း မတ်လာတာ...စိတ်ကို မနည်း ထိန်းပေမဲ့ မြင်ရတဲ့ အာရုံက စွဲဆောင်မှု ခပ်ပြင်းပြင်း။ သူ သတိမထားမိပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းမိပါရဲ့။ နှစ်ယောက်စလုံး ရေပူရေနွေးတွေ တဖွားဖွား ကျနေတဲ့ ရေပန်းအောက်ကို လှမ်းဝင်လိုက်ကြတယ်။ ရေနွေးငွေ့တွေက ထောင်းထောင်းထနေတဲ့ကြား ကျွန်တော်မသိမသာ သူ့ကို ကြည့်နေမိပါရော။ သူ့လက်ချောင်းတွေဟာ ရင်အုပ်တွေကို ဆပ်ပြာမြှုပ်တွေနဲ့ ပွတ်သပ်သလို နွဲ့ပြောင်းသော ဆံနွယ်တွေကို ထိုးဖွပြန် ပါတယ်။ သူ့ငပဲ တဖြည်းဖြည်းမာလာတာကို ကျွန်တော်မြင်နေရတာက အတော်မိုက်တယ်ဗျာ။ ကျစ်လစ်ပြည့်တင်းနေသော abs တလျှောက်ကနေ V ပုံသဏ္ဌာန် ခါးကျဉ်းကျဉ်းဆီ ရေတွေစီးဆင်းသွားရာက ချက်ကိုမတ်မတ်ညွှန်ပြနေသော ငပဲနားမှာ အနားသပ်သွား တယ်။ ရုတ်တရက်ဆိုသလိုပါပဲ လျှက်ပြက်တာကို မြင်လိုက်ရသလို မိုးခြိမ်းသံကို မရှေးမနှောင်းကြားလိုက်ရပါတယ်။ နောက်တော့ လင်းနေတဲ့ မီးတွေ အကုန်ပိတ် အမှောင်ထုထဲ ကျွန်တော်တို့ရောက်သွားပါရော။
ရေချိုးခန်းထဲမှာ ပြတင်းပေါက်က ဖွင့်မရ ထွက်ဖို့ကလည်း တံခါးမကြီးတစ်ခုသာရှိတာလေ။ ကျွန်တော်ရေပန်းအောက်ကနေထွက် ခြေချော်မလဲအောင် ကြိုးစားကာ အ၀တ်တန်းနားရောက်အောင်သွားဖို့ ကြိုးစားမိပါတယ်။Adam ရဲ့ဘေးမလှမ်းမကမ်းနားကိုအရောက် "မင်းဘယ်မှာလဲ သူငယ်ချင်း?" တဲ့မေးသံထွက်လာရော။ သူ့အသံက ကျွန်တော်နှင့်သိပ်မဝေးဘူးဗျ။ ကျွန်တော် ဟန်ချက်ညီအောင် ထိန်းရင်း ဒူးတုပ်ထိုင်ချလိုက်တယ်။ ရေတွေက အရမ်းချောစေတာကြောင့်ပါ။ အနားကိုလူရောက်လာတာ အာရုံခံစားမိတော့ Adam လက်မောင်းအထင်နဲ့ ကျွန်တော်ဆွဲယူအားပြုလိုက်ပါတယ်။ သံသယဖြစ်တာနှင့် လက်ကိုပြန်လျောချလိုက်ပြန်တော့ ခပ်ခုံးခုံးနှင့် အသားဆိုင်တစ်ခုကို ခလုတ်တိုက်မိတယ်လေ။ OMG!! Adam ရဲ့ ငပဲကြီး ကျွန်တော့်လက်ထဲ ဆုပ်ကိုင်မိသည်ပေါ့။ လက်ကို မဖယ်ချင် တုန့်ပြန်မှု ဘယ်လိုလာမလဲဆိုတဲ့ ချီတုံချတုံဖြစ်မှုတွေနှင့်အတူ လက်ကိုပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်မိပေမဲ့ ပြန်စမ်းကိုင်ကာ ခပ်ဖွဖွလေး ပွတ်သပ် ပေးမိပါတယ်။
ကျွန်တော့်လှုပ်ရှားမှုက တခြားနေရာကိုလည်းမရွေ့သလို သူ့နှုတ်ဖျားကလည်း ဘာစကားသံမှထွက်မလာပါ။ အရာအားလုံးတိတ်ဆိတ် လျက် ကျွန်တော်ကလည်း သူ့ငပဲကိုကိုင်လျက်။ အလင်းရောင်က လုံးဝမရှိဆိုတော့ သူ့တုန့်ပြန်မှုက ဘယ်လိုဆိုတာ ကျွန်တော်မမြင်နိုင် ပါဘူး။ သူက ဘေးကိုနည်းနည်းရွှေ့တော့ ကျွန်တော်လည်း အလိုက်သင့်ရွှေ့ပါတယ်။ ကြမ်းပြင်ကြွေပြေားတွေက အေးနေပေမဲ့ ရေပူတွေ ကြောင့် နွေးနေလို့တော်ပါသေးတယ်။ သူ ကျွန်တော့်အနားတိုးကပ်လာသံကိုကြားရတော့ ကျွန်တော့်မသိစိတ်က နည်းနည်းလန့်သလို ခံစားမိတယ်ဗျ။ ကျွန်တော့်လက်ကို ဆွဲကိုင်ကာ သူ့ငပဲကိုကိုင်တွယ်စေသလို သူ့လက်တစ်ဖက်က ကျွန်တော့်ဦးခေါင်းကိုဆွဲကိုင် အရည် ကြည်စို့ထွက်နေသော သူ့ငပဲထွားထွားကြီးကို ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲဖိသွင်းရော။ သူ့ငပဲကို ကျွန်တော့်အာခံတွင်းထဲမှတစ်ဆင့် လည်ချောင်းထဲကို အထုတ်အသွင်းမှန်မှန်လုပ်နေချိန်မှာတော့ ကျွန်တော့်စိတ်နှင့်ကိုယ် ကပ်အောင်ကြိုးစားပြီးနေရတယ်။ တစ်ခါ တစ်ခါ များ သူ့ဆီးခုံမွှေးတွေနှင့် ကျွန်တော့်ပါးပြင် ထိထိသွားတာကို ခံစားရပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ သူ့တင်သားဆိုင်တွေကို ဆွဲဆွဲညှစ်ပြု မိသေးတော့ သူ့နှုတ်ဖျားက ကျေနပ်မိန့်မူးသံထွက်လာပါသတဲ့။ ကျွန်တော် တတ်သလောက်မှတ်သလောက် လျှာစွမ်းအာစွမ်းကို အမှောင်ထုထဲမှာ အစွမ်းကုန်ပြမိပါတယ်။ အာခံတွင်းထဲ သူ့ငပဲထွားထွားကြီးရဲ့ လှုပ်ရှားပြောင်းလဲလာတာကို သတိပြုမိချိန်မှာ သူ့ ညည်းညူသံကလည်း ကျယ်သထက်ကျယ်လာပါတယ်။ "အာ...အား...ငါပြီး...ပြီးတော့မယ်" လှိုဏ်သံပါတဲ့ အော်သံနှင့်အတူ အော်ဟစ် ပါလေရော။
"ဒုန်း" ဆိုတဲ့မိုးခြိမ်းသံနှင့်အတူ သူ့ရဲ့ပူပူနွေးနွေးသုက်ရည်တွေကို ကျွန်တော့်လည်မျိုထဲ ပန်းထည့်လိုက်ပါတော့တယ်။ ဘယ်လောက် တောင်များသလဲဆိုရင် ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းထောင့်ဖျားမှ လျှံကျလာတဲ့အထိပါ။ ကျွန်တော်လည်း နိုင်သလောက် ယောင်ရမ်းမျိုချမိရဲ့။ မာနေဆဲ သူ့ငပဲကို ကျွန်တော့်အာခံတွင်းထဲက အသာဆွဲထုတ်ပြီးနောက်မှာတော့ သူ့လက်တွေဟာ ကျွန်တော့်ငပဲကို လှမ်းဆွဲကိုင် လိုက်ပါတယ်။ စိတ်လှုပ်ရှားနေမှုကြောင့်ရော ကိုယ်သဘောကျလာမိသူရဲ့ ကိုင်တွယ်မှုကြောင့်ရောထင့် ကျွန်တော့်ငပဲဟာ ဖြောင်းကနဲ မြည်လောက်အောင် မာတောင့်သွားတယ်ဗျ။ သူ့အကိုင်အတွယ်မှာ ကျွန်တော့်စိတ်တွေ ထိန်းနိုင်ပါ့မလား ကိုင်တွယ်နိုင်ပါ့မလား တွေးနေတုန်း သူသည် ကျွန်တော့်ကို မတ်မတ်ရပ်စေလိုက်ကာ ရွှေဥတွေကို နှုတ်ခမ်းလွှာတွေနှင့် စတင်ပွတ်သပ်ပါရော။ "အိုး.... အိုးမိုင်ဂေါ့" ကျွန်တော့်ငပဲထိပ်ဖျားလေးကနေ ဖွဖွ ဖွဖွဖြင့် တဖြည်းဖြည်း သူ့အာခံတွင်းထဲမျိုချလိုက်တာဗျာ ပူနွေးစိုစွတ်ပြီး ခံစားချက်က တကယ့်ဖျားစရာ။ သူ့နှုတ်ခမ်းသားတွေထဲကနေ တဖြည်းဖြည်း ပွတ်ဆွဲပြီး အပြင်ထွက်လိုက် ၀င်လိုက်နှင့် လျှာလေးနှင့်လည်း တစ်ချက် တစ်ချက် ကလိကာ ရစ်ပတ်လိုက်....."အာ.......အာ...ရှီး"
သုံးလေးမိနစ်လောက် သူပြုစုပြီးနောက် ကျွန်တော့်အား နံရံကို မျက်နှာမူကာ ခပ်ကုန်းကုန်းနေစေပါတယ် ခန္ဓာကိုယ်ကိုလေ။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ခါးအစုံကို သူ့လက်နှင့် ထိန်းကိုင် ခပ်ထွားထွား ရှည်ရှည် ငပဲကြီးကို တစ်ရစ်ခြင်းဖိသွင်းပြန်သည်ပေါ့နော်။ သူ့ဆီးစပ်က အမွှေး နုနုတွေ ကျွန်တော့်တင်သားဆိုင်တွေနှင့် ဖိကပ်သွားတော့မှ လှုပ်ရှားမှုကို ခဏရပ်တယ်ဗျ။ ခဏကြာတော့ သူ့တင်ပါးတွေကို ဇကောဝိုင်း ၀ိုင်းသလိုမွှေတော့ ကျွန်တော့်စိတ်တွေဲထဲ ဆီးသွားချင်သလိုလို ဒီထက် ခပ်ပြင်းပြင်းအရသာတွေလိုချင်သလိုလိုပဲခံစားရတယ်။ အို... မကြာပါဘူးလေ သူ့ငပဲကို ဖိဖိသွင်းပြန်ထုတ်တာ မြန်မြန်လာတာ ခန္ဓာကိုယ်နှစ်ခုဟာ ပူးကပ်နေတော့တာပါ။ ကျွန်တော့်ကိုယ်ပေါ်ရော သူ့ကိုယ်ပေါ်ရော ရေတွေက တဖြန်းဖြန်း ကျနေတော့လည်း အသံတွေမည်နေပါတယ် တဗြန်းဗြန်းပေါ့။
Adam နှုတ်ဖျားက အသံကျယ်ကျယ် တစ်ချက်အော်သံကြားရပြီးနောက် ကျွန်တော့်တင်သားဆိုင်နှစ်ဖက်ကြားက ချိုင့်ဝှမ်းလေးထဲဝယ် ပူနွေးမှုကို ခံစားရပါတော့တယ်။ "Ugh, ငါဒီလိုပြီးတာ...ဖီလင်ကောင်းတာ မကြုံဖူးဘူးကွာ" တဲ့ ကျွန်တော့်နားရွက်နားကပ်ပြီး ပြောချိန်ထိ သူ့ငပဲရှည်ရှည်ဟာ ကျွန်တော့်ခရေ၀ထဲက မထုတ်သေးပါဘူး။ ပါးစပ်ကိုဟ အသက်ကို ရှူရှိုက်လိုက်ပြီးကာမှ ကျွန်တော့်ခါးအစုံကိုထိန်း ကိုင်ပြန်ကာ ဆွဲထုတ်ပါတော့တယ် သူ့ငပဲကို။ နှစ်ဦးစလုံး တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်ထွေးဖက်ပြီး ရေပူနွေးနွေးအောက်မှာ အနမ်းပွဲ ကျင်းပနေစဉ်မှာ မီးတွေပြန်လင်းလာပါ၏။ နောက်တစ်ကြိမ် မုန်တိုင်းဝင်မှာလည်း သိပ်မကြောက် မီးပျက်မှာလည်း မကြောက် အားအင်ကိုပြည့်လို့....."So Warm!!"
'တောင်သမန်အင်း' ကို ဖြတ်သန်းတိုက်ခတ်လာသောလေသည် လတ်ဆတ်အေးမြနေ၏။
အင်းထဲသို့ ယနေ့ 'ရေတိုး' သော်လည်း လေက ခက်ထန်ခြင်းမရှိ။
အင်း၏ အနောက်ဘက် အကွေ့အ၀ိုက် ကမ်းခြေတစ်လျှောက်လုံးမှာ 'မယ်ဇယ်ပင်' အကြီးကြီးများက အုံ့ဆိုင်းရိပ်မိုးနေကြသည်။
အရှေ့ဘက် 'ကျောက်တော်ကြီးဘုရား' နှင့် အနောက်ဘက်မှ 'တောင်မင်းကြီးဘုရား' များကိန်းဝပ်တော်မူရာကုန်းမြေများကို ဆက်သွယ် နိုင်အောင် တည်ဆောက်ထားသည့်ခြေတံရှည်ကြီးများနှင့် 'ဦးပိန်တံတား'သည် အင်းရေပြင်ကို ကန့်လန့်ဖြတ် တည်ဆောက် ထားလေသည်။
ဤတောင်သမန်အင်းနှင့် ဦးပိန်တံတားကို မြန်မာပြည်သူပြည်သားများ မရောက်ဖူးလျှင်သာရှိမည်၊ မမြင်ဖူးသူရှားပါလိမ့်မည်။
"ဟဲ့...ထိုင်ငေးနေတာ တော်တော့လေ။ ဒီနေ့ ညနေပဲ ရန်ကုန်ပြန်ရမှာ မဟုတ်လား?"
"ဟုတ်တယ်....ငါတော့ ဒီရှုခင်းကို လွမ်းနေဦးတော့မှာပဲ"
"ကျွန်တော်တို့ မန္တလေးရောက်တိုင်း လိုက်ပို့နေတာကိုများပိုပိုလွန်းတယ်ဗျာ"
"မိဂျစ်...ဂျစ်တူးမလို့ ခေါ်လည်းမကြိုက်။ ညည်းလို မေ့လွယ် ပျောက်လွယ်မဟုတ်ဘူး သိလား"
"ကဲပါဗျာ....ပြန်လာလည်လို့ရတာပဲ။ ဂျစ်တူးတို့ မြန်မာပြည်က....Warmly Welcome!!"
Alex Aung (20 Dec 2012)
Note: April လအတွက် တတိယမြောက်အဖြစ် High-School Ecstasy ကို ပြန်လည်တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။
ကိုကြီးပြောမယ် ညီလေးနားထောင် (အပိုင်း ခြောက်)
ပျော်ရွှင်လှပ ဂေးဘဝ...ကြောင်းပြ ဤ ၁၀ချက်